Ukulandelelana 'kwamarhamncwa amnandi': Faka uJohnny Depp kunye noColin Farrell - Ukuzonwabisa
Eyona Ukuzonwabisa Kutheni ungatshintshi uJohnny Depp kunye noColin Farrell kwiFrancise 'yeZilwanyana eziMangalisayo'?
Kutheni ungatshintshi uJohnny Depp kunye noColin Farrell kwiFrancise 'yeZilwanyana eziMangalisayo'?
UColin Farrel kwi 'Beast Fantastic kunye nalapho unokuzifumana khona.'Ngokunyanisekileyo iWarner Bros.
Namhlanje, iWarner Bros ityhile iinkcukacha eziphambili zesakhiwo se- Izilwanyana eziMangalisayo: Izenzo zolwaphulo-mthetho zaseGrindelwald , enye indlela eya kwi-2016 Izilwanyana ezintle kunye nalapho unokuzifumana khona . Njengolona ngeniso lutsha kwihlabathi leWizarding likaHarry Potter kwaye ngokuqinisekileyo I-Warner Bros. ’eyona franchise inkulu , Le yinto enkulu kumzi mveliso weemovie. Nalu ke ulwazi olutsha olutyhilwe yi-WB:
Ekupheleni kwefilimu yokuqala, i-Wizard enamandla uGellert Grindelwald (Depp) wabanjwa yi-MACUSA (Magical Congress yase-United States of America), encediswa ngu-Newt Scamander (Redmayne). Kodwa, esenza okuhle kwisoyikiso sakhe, uGrindelwald wasinda elugcinweni kwaye sele ehleli malunga nokuqokelela abalandeli, uninzi olungalindelekanga kwi-ajenda yakhe yokwenyani: ukuphakamisa ii-wizard zegazi elimsulwa ukuze zilawule zonke izinto ezingezizo ezomlingo.
Ngelinge lokuthintela izicwangciso zikaGrindelwald, u-Albus Dumbledore (uMthetho) wenza ukuba umfundi wakhe wangaphambili u-Newt Scamander, avume ukunceda, angabazi ubungozi obuzayo. Imigca iyatsalwa njengoko uthando kunye nokunyaniseka kuvavanywa, nditsho naphakathi kwabahlobo abasenyongweni kunye nosapho, kwilizwe eliya lisanda ngokwanda.
Ukongeza kwiinkcukacha zebali, uWarner Bros wakhupha ifoto eneenkcazo ezithile zabalinganiswa (jonga uJude Law njengo-Young Dumbledore).
Kunyaka omnye, buyela kwiWizarding World eneZilwanyana eziQhelekileyo: Ulwaphulo-mthetho lwaseGrindelwald. #MagicInProgress #FantasticBeasts pic.twitter.com/8aWj8xhGj5
- Izilwanyana ezintle (@FantasticBeasts) NgoNovemba 16, 2017
UMTHETHO WEJUDE Udlala i-ALBUS encinci DUMBLEDORE, ethatha ingubo yenye yeJK. Abalinganiswa bakaRowling abathandekayo; U-EZRA MILLER wenza ukubuya njenge-CREDENCE engummangaliso, ongaziwa ukuba ungakanani ukuphela kwefilimu yokuqala; UCLAUDIA KIM ibonakala njengoMaledictus, ophethe isiqalekiso segazi esimisela ukuba ekugqibeleni aguqulwe abe sisilo; ZOË KRAVITZ Udlala uLETA LESTRANGE, owayekhe wakufutshane noNewt Scamander kodwa ngoku uganene nomntakwabo; IKHOLUMUVULELO ujoyina isamente njengomntakwabo Newt omdala, uTHESEUS SCAMANDER, iqhawe lomlo elidumileyo kunye neNtloko yeOfisi yeAuror kwi-Britane Ministry of Magic; UKATHERINE WATERSTON ubuya njengo-TINA GOLDSTEIN, obuyiselwe njenge-Auror yeMACUSA; EDDIE REDMAYNE iinkwenkwezi kwakhona njengewizarding world Magizoologist NEWT SCAMANDER, osele ezuze udumo kwihlabathi lewizard njengombhali weZilwanyana eziMnandi kunye nalapho uzifumana khona; KUNYE NOKUGQIBELA iphinda iphindise indima ye-No-Maj kuphela kwiqela, uJACOB KOWALSKI; ALISON SUDOL iphinda iphinde ibe yinxalenye kadade kaTina okhululekileyo, uQUEENIE GOLDSTEIN, iLegilimens ekwaziyo ukufunda iingqondo; kwaye UJOHNNY DEPP ibuya njengenyanga elinamandla loMnyama GELLERT GRINDELWALD eWarner Bros. Imifanekiso ’IZILWANYANA ZOKWENZA: AMATYALA E-GRINDELWALD.
Kodwa umbuzo wethu ngulo: kutheni ugcine iDepp kwindima ebaluleke kangako konke konke? Ngaba ngokwenene kufanelekile ukuba ube nentloko?
Umdlali weqonga usajongana nemibuzo malunga nezityholo zika-Amber Heard zokuphathwa gadalala kwasekhaya, ndingasathethi ke ngokulwa kwakhe okuqhubekayo nenkampani yakhe yolawulo lwangaphambili. Lilonke, iDepp izisa impikiswano ngakumbi kwindima kunokuba kufanelekile ngoku. Akakhange abe yibhokisi enkulu yeofisi ebhokisini kwiminyaka-i IPirates yeCaribbean I-franchise ivelisa ukuncipha kwembuyekezo kwaye UAlice ngeGlasi yokuKhangela flopped-kunye no-2015 Ubunzima oMnyama Ngaba yayiyeyona movie yokugqibela ayenzileyo phantse kwiminyaka elishumi. Izilwanyana eziMangalisayo wenza i-814 yezigidi zeedola nge-cameo evela eDepp, ke ayisiyiyo into yokuba unxibelelene nomgca ongezantsi. Usengumdlali onetalente, kodwa ayililo igama eli-buzzy awayekade enalo kwaye wayenokuba ngumxhaphazi wasekhaya.
Kwaye akunjalo ngokungathi i-WB ayinakufumana indawo efanelekileyo; babenayo eyokuqala Izilwanyana eziMangalisayo . UColin Farrell, owayedlala umlinganiswa phantse kuyo yonke ifilimu ngaphambi kokuba i-twist enkulu ityhile, ayingcwele ngokwakhe, kodwa akahambi nohlobo olufanayo lokupakisha iimpahla njenge-Depp ngoku. UFarrell ukwangumdlali weqonga ongaphantsi komhlaba onokuthi aqhubeke nendima nge-aplomb. Ithuba lakhe kwifilimu yokuqala yamkelwa kakuhle kwaye ukumgcina kuyo ngekhe kuphazamise abaphulaphuli.
Ngaba kufanelekile ukuba iDepp ibuyiselwe umva xa ikhatywa ngabanye abalandeli? I-Warner Bros kubonakala ngathi icinga njalo, kodwa ukuba kunokwenzeka, banokubuyiselwa ngokugqibeleleyo endlini.
UBilly Graham, uNixon kunye no-Anti-Semitism
Ukuphela komcimbi: USam Shepard uGqithisela ii-Co-op Shares ku-Ex Jessica Lange
Imvelaphi eNtsha ka-Uber ayiSebenzi ngaphandle kweliCandelo liphambili
umthetho kunye nocwangco svu 2016
umvuzo omkhulu wobugcisa we-rapids ngo-2015
jonga igazi lokwenyani lehlabathi
UJerry lewis ufile okanye uyaphila
Lana del rey kunye ne-stevie nicks
kwenzeka ntoni xa ume narcissist